बिहिबारको दिन यी २ कार्य गर्नुहोस् ४ कार्य नगर्नुहोस ! |बिहिबारको दिन यी २ कार्य गर्नुहोस् ४ कार्य नगर्नुहोस ! – हिपमत
बिहिबारको दिन यी २ कार्य गर्नुहोस् ४ कार्य नगर्नुहोस !
जे कार्य पनि हतारमा गर्दा कार्य सफल नहुन सक्छ । त्यसैले कुन बार कस्तो कार्य गर्दा सफल भइन्छ भन्ने कुरा हामिलाई थाहाँ हुनु जरुरी छ । बेलैमा कस्तो कार्य गर्दा सफल भइन्छ भन्ने कुरा जानकारी भएमा आइपर्ने समस्याबाट सजिलै छुटकारा पाउँन सकिन्छ । धार्मिक मान्यता अनुसार बिहिबार गरेका केहि कार्यहरु सफल हुने गर्छन् । तपाईले अनावश्यक खर्चका कारण पैसा बचाउन सक्नु भएको छैन भने बिहीबार यस्ता कार्य गरेमा खर्च कम हुने गर्छ । बिहिबारलाई गुरुबार भनिने हुनाले गुरुको कृपा हुने ब्यक्तिलाई कहिले पनि पैसाको कमि हुदैन। हरेक बिहिबार स्नान गरी घ्यु दीप बालेर भगवान बिष्णुको पुजा गर्नु धेरै नै राम्रो हुन्छ । यस दिन साँझ केराको बोटमा दीपक जलाएर बेसनको मिठाई चढाउनु र कसैले पैसा माग्न आएमा नदिनु राम्रो हुन्छ । बिहिबार पैसा दिएमा तपाइको आर्थिक समस्या पैदा हुन्छ। यस दिन दिएको पैसा फिर्ता नआउने सम्भवना पनि रहन्छ।
हामी थोरै मात्र मानिस कुनै कार्य गर्दा बार हेरेर कुन बार के कार्य गर्दा ठिक हुन्छ वा कुन बार के गर्दा ठिक हुँदैन भनेर गर्ने गछौँ ।
तर हामी धेरै मानिस कुनै कार्य गर्दा धर्मशास्त्र अनुसार गर्दैनौं जे सुकै काम होस् जुनसुकैबार गरी रहेका हुन्छ । धर्मशस्त्रले भन्छ कुनै कुनै कार्य गर्दा जुनसुकै बार गर्नु हुँदैन यसरी गर्न नहुने बारमा ती कार्यहरु गरेमा अशुभ हुन्छ, जिवनभर सम स्या आईरहन्छ, जिवनमा दुःख पि डा भईरहने मान्यता छ ।
बिहिबार यी कार्य गरेमा अशुभ
दारी वा नङ काट्ने गर्नु हुदैन
भारी कपडा धुने र फोहोर हटाउने
बिहिबार कपाल धुने, कपडा सफा गर्ने, दारी का-ट्ने, रौ का’ट्ने, फेशियल, नङ काट्ने काम कहिले पनि नगर्नुस् । त्यस्तै घरको सरसफाइ माकुराको जालो हटाउने काम पनि बिहिबार नगर्नु नै उत्तम हुन्छ । बिहिबारको दिन भारी कपडा धुनु राम्रो मानिँदैन । बिहीबार घरमा भएको फोहोर बाहिर फाल्नु पनि नराम्रो मानिन्छ । बिहिबारमा घरमा भएको फोहोर बाहिर फाल्दा अशुभ हुने मानिन्छ ।